ပထမအကြိမ် အစိုးရ နည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း) မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ပစ္စည်းမျာ?? - Yangon Media Group
မိုးညှင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
ကချင်ပြည်နယ်မိုးညှင်းမြို့နယ်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း) ၌ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်းသင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ပစ္စည်းများပြ ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက အဆိုပါ ကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိ ရသည်။
အဆိုပါပြပွဲတွင် LEd, Laser door, Security လေဆာအသုံးပြု လုံခြုံရေးအချက်ပေးစနစ်ပြပွဲ၊ Smart Home စမတ်ကတ်ဖြင့် နေအိမ်ခြံတံခါးလျှို့ဝှက်တပ်ဆင်နည်း၊ Goal SCore board ဂိုးရလဒ်ပြ ပရောဂျက်ပြခန်း၊ LEd အိမ်သုံးဘုရားမီးအလှဆင်မီးဆိုင်းမီးပန်း ပြုလုပ်ခြင်းပ ရောဂျက်၊ လေးလမ်းသွားမီးပွိုင့်ကို IC. နှစ်လုံးဖြင့် စမ်းသပ်သ ရုပ်ပြခြင်း။ တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲအဖြစ် နောက်ဆုံးနှစ် 6-BE ကျောင်းသူ မခမ်းကြူက စမတ် Smart ကားပါကင် ပြုလုပ်ပြသ ခြင်း၊ ရှိုင်းဝေလင်းနှင့်အဖွဲ့မှ Simple Electronic Piano Using 555 Timer ဖြင့် ပီယာနိုအငယ်စားတစ်ခု စမ်းသပ်ပြုလုပ် ပြသခြင်း၊ ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် မီး ခလုတ်အဖွင့်အပိတ်ကိရိယာပြသခြင်းနှင့် လက်မှုပညာအဖြစ် စားပွဲကုလားထိုင် ဗီရိုများ၊ သံထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ထွန်ခြစ်များ၊ ပန်းကန်ဆေးအိမ်သုံးဆပ်ပြာရည်များ၊ ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်း သရုပ် ပြလမ်းညွှန်ပြခန်းများ၊ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ တီထွင်စမ်းသပ်ခြင်း အမျိုးမျိုးတို့ကို လက်တွေ့သရုပ်ပြကြသည်။
ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွင် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားများ၏ အုပ်စုအလိုက်ပြပွဲများနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ အုပ်စုအလိုက်တီထွင်စမ်းသပ်ခဲ့သော နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွင် လူကြိုက်အများဆုံး ပေါ်ပြူလာဆုနှင့် မေဂျာ ဘာ သာရပ်ဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။